Wax ku qaata waanada gabdhaha waa ceeb.Kuwa Ilaahay ceebta malabka uga dhigayow. « CEELBARDAALENEWS.COM
« Wacdarihii Awdalstate Toronto
Caawi Barakacayaasha Boodhka,Buqdhada iyo Saameel. »
Wax ku qaata waanada gabdhaha waa ceeb.Kuwa Ilaahay ceebta malabka uga dhigayow.
Anagga oo ka kooban afar gabdhood oo ka kala socda dhamaanba beelaha Samaroon, waxaanu u soo gudbineynaa qoraalkani oo iskugu jira cabasho iyo canbaareyn shabakadaha wararka ee internetka gaar ahaan kuwa loo adeegsado fadeexadaha iyo aflagaadooyinka. Shabakadahani waxay aad uga shaqeeyaan kala fogeynta umada wada dhalatey ee reer Awdal iyo Salal.
Waxaanu marka hore canbaareyneynaa dadka leh ee maamulana wargeysyadani internetka. Wargeysyadani internetku waxay baryahani danbe ku caan baxeen kala daadinta danaha reer Awdal iyo Salal. Sumacad xumo ayaad u soo jiidaysaan dadka reer Awdal/Salal hadaad ku sii socotaan wadadani qaldan eed ku joogtaan. Dadka adeegsada warbaahinta internetka waa in aaney ku gafin jiritanka umaddani. Waa inay wax iskula hadhaan marka ay baahinayaan warar aan sal iyo raad lahayn kuwaasi oo dadka wada dhashey dhex dhigaya iskhilaaf.
Hadii aad siyaasi ka soo hor jeedaan ood wax ka sheegeysaan, shaqsigaasi ku koobnaada. Ka daaya qabiilooyinka dhan eed wada aflagaadeyneysaan dhinac kastaba ha ka soo jeedaane. Sidoo kale hadii aad arin isku maandhaafsan tihiin si cilmiyeysan oo raganimo leh u dooda. Cayda iyo ceebta aad waliba gaadheysaan ilaa waalidiinta waayo hore geeriyoodey waa laga fiican yahay. Waxaad u caytameysaan sidii ganboyar aan wali caqliyeysan oon lahayn garaad qabta ee fadlan joojiya anshax xumadani.
Waxaanu aad uga xumahay in dadka shisheeyaha ah een ka dhalan Gobolladani ay aflagaadada dadkeena ka akhristaan wargeysyada internetka, una adeegsadaan iney anaga dib noogu caayaan oo ay na weydiiyaan su’aalo ay ka mid yihiin; Waa maxay sida foosha xun ee ay ragiinu isku caayayaan? Waa ayaan daro inaad idinku dhexdiina cadaawad aan meelna jirin isku qaadaan, ceebtiinana ku baahisaan shabakada internetka, taasi oo aad uga farxineysa dadka jiritaankiina iyo iskaashigiina neceb. Sidani hadii aad ku sii socotaan ,waxay idiin horseedi cadaawad iyo aargoosi dhexdiina ah oo aan marnaba loo baahneyn. Waxaa ingagu waajib ah dhamaanteen in danta guud ee dadkeena iyo dalkeena aynu u guntano inaga oo mid kaliya ah, hal ujeedana leh. Hadaba horumarka guud aynu ku dadaalno inta aan waqtiga ku khasaarineynu wax aan faa’iido inoo lahayn khasaare mooyee.
Geesiga samaroon meel kale ayaa looga baahan yahay hadalkiisa kulul iyo hanjabaadiisa, dhexdiina loogama baahna. Waxqabadkiisa iyo taladiisana dadkiisa iyo dalkiisa ayaa u baahan. Waxaa idinla gudboon tamarta intani le’eg inaad u isticmaashaan wax wanaagsan oo horumar u leh naftiina iyo dadkiinaba. Ogaada ragii Samaroonow, murti caan ah ayaa tidhaa “Hadii war-faafinta loo adeegsado si qaldan waxay kala kaxeysaa qoom dhan, hadii si sax ah loo adeegsadana waxay isku keentaa umad aad u kala fogeyd”. Waxaanu idinka codsaneynaa inaad noqotaan kuwo u adeega umadooda oo ku guubaabiya warfaafinta ay awooda u leeyihiin wax wanaagsan oo ka hadla daryeelka dadka degan gobolladdani. Bal dib iskugu noqda oo halka aad ku sugan tihiin labaatankan sano ee u danbeeyey dib u eega. Waxaad u baahan tihiin inaad xisaabtan taan ood is weydiisaan idinka oo wada dhan waar maxaa inaga lumey, maxaanse inoo kordhey labaatankani sano ee u danbeeyey een ku biirnay nidaamkan qabiillka ku dhisan ee dhulka ka jira?
Dhibaatooyinka nidaamkani uu u keenay Awdal iyo Salal wax ka midda isaga oo ilihii dhaqaalaha baabi’iyey. Awdal waxay lahayd madaar diyaaraduhu ka soo degi jireen oo imika xidhan. Waxa kale oo deganaa hay’ado caalami ah oo dhaqale ku soo kordhin jirey gobolka. Waxaa dhacdey in dhamaanba hay’adihii Hargeysa loo rarey. Halbowlayaashii dhaqaale ee gobolku way wada xayiran yihiin. Arrintani waxay keentay dakhligii soo galayey gobolka oo baa’ba, shaqo la’aan iyo in Hargaysa wax walba loogu tiirsanaado. Intaasi waxa u dheer in ilaha kale ee dhaqaaluhu ka yimaado sida cashuuraha Goboladeena hargeysa la geeyo iyada oo dhulkii laga soo gurayna aan waxba loogu qaban. Waxa inala gudboon in aynu inagu lahaano nidaam danteena ka shaqeeya iyo xeerer aynu ku kala soco oo meel inoo yaala inta aan is caayeyno ee la inagu wiirsanayo. Waxaa nasiib daro ah oo maanta nooga kiin dhex muuqata maahmaadii ahayd “ Ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa”. Markii la arkey tafaraaruqiina ayey u fududaatey reerka jaarkiinu inuu marna jidgooye u dhigto safarkiina oo laayaan marna ay hurdada idinku gaadaan. Nina idinkuma soo dhaceen hadii aad mideysan tihiin. Imika iyo haatan waa la idiin dhaamaa inaad iska caydaan internetka oo shisheeyuhu idinku maadeysto.
Waxa la idinka sugayaa inaad dadkiina wax u qabataan. Looma baahna inaad waqti ku lumisaan computerka gadaashiisa ood cay isku weydaarsataan shabakadaha internetka, idinka oo gobolladiinii lagu xaddayo nidaam qabiil ku dhisan oo dushiina lagu sameystey.
By: Muna Cabdi, Ifrah Ahmed, Safia Ali iyo Hibo Ahmed
Safiya Ali safiyaali69@yahoo.com
This entry was posted on December 24, 2011 at 4:35 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.